I-5.11 YETACTICAL VTAC MK II 36 INCH RIFLE CASE CASE-UKHUSELEKO LWETACTICAL - IZIXHOBO
I-5.11 yeTactical VTAC MK II 36 Inch Rifle Case Case-uKhuseleko lweTactical
Xa kuziwa ekurhuqeni imipu yam, kunye nezixhobo ezinxulumene noko, ukhuseleko kunye nomthamo omkhulu wempahla zizinto ezimbini endingazixabisiyo kuphela kodwa eziyimfuneko. Elona xesha lide ndanamathela kwimikhono elula yompu, kodwa njengabanini bemipu ngaphandle, ingqokelela yakho iyakhula kwaye iyakhula. Ngexesha nje, ndizifumene ndisiya kuluhlu olunezinto zokudlala ezininzi nangaphezulu kunokuba umkhono wemipu elula unokuwuphatha.
Ngaphezulu kwesiqhelo, imipu emibini ecaleni kwemipu emibini yenza usuku olukhulu kuluhlu. Ndiqinisekile ukuba ezinye izinto ozikhethayo zincinci kwaye ezinye zikhetha ngaphezulu, kodwa kum, indinika ukhetho oluninzi lokuziqhelanisa nalo kuluhlu.
Xa ndeva malunga ne-5.11 Tactical VTAC MK II 36 Inch Double Rifle Case, ndandisazi ukuba esi sisiqwenga esinye sezixhobo andikwazi ukudlula. Ngelixa yimeko yompu ekupheleni kosuku, into eyenzayo xa kuthelekiswa nabanye abaninzi phaya iyamangalisa ngokwenene.
Iyafumaneka ngombala omnyama, impompo kabini kunye nombala wentlabathi
Ivenkile ezimbini ezinobungakanani obupheleleyo ezingama-36
I-muzzle edibeneyo kunye neepokotho zesitokhwe
I-intshi ye-cubic engama-2054, ilitha ezingama-343 zokugcina amandla
Inkqubo yobhaka wejokhwe eyi-5.11
Inkqubo yangaphakathi yokubopha umpu
Ukwahlulahlula ngaphakathi ngaphakathi
Ingaphandle yenylon ye-1050D
Ingaphakathi le-500D ripstop
I-laser-cut web kunye namaqonga e-loop
Umhlaba uvavanywe ziiViking Tactics
Izinto eziphangaleleyo ezibini ezingaphandle ezifakwe ngaphakathi
Igumbi elikhulu elingaphambili elineziphu
I-5.11 yeTactical VTAC MK II 36 ye-intshi yoPhononongo lweeRifle
izibhalo zebhayibhile ii-tattoos kwingalo yangaphambili
ii-tattoos zengalo yesizwe yamadoda
Umsebenzi ophambili wokugcina i-AR10 yam kunye ne-HK SP5K ikhuselekile ngelixa usiwa kuluhlu, eli tyala le-5.11 Tactical lenza umsebenzi wenziwe. Kodwa ngokungafaniyo namanye amatyala, ikwenza ngendlela eyahlukileyo.
Kubaqalayo, kukho i-muzzle ekhuselayo kunye neepokotho zesitokhwe ecaleni kwesahluli esinesixa esikhulu. Inkqubo yokubopha intambo yangaphakathi isebenza njengomlingo, kwaye emva kokuyisebenzisa ukukhusela imipu yam kwimeko, andinakubuyela eVelcro kwakhona. Isebenza ngokukuko kakuhle ngokulingeneyo ngokumangalisayo.
Ngokubhekisele kubungakanani, i-16.5 AR10 yam enendawo yeVortex ilungile ngokuthe nkqo kwaye ikwazile ukungena ngokuthe nkqo ngaphandle kwengxaki. Ngelixa ndingenakulunga kuyo kunye nesicinezeli seWilson Combat, iipokotho ezongezelelweyo zindinika indawo eninzi kwenye indawo ukuyigcina. Kwi-HK SP5K yam, ndikwazile ukuyilinganisa ngaphakathi imeko, ndisacinezela, isitokhwe sikhutshiwe, kwaye ndinendawo eyongezelelekileyo.
Ngaphandle kwamagumbi okugcina umpu kabini angama-36, i-5.11 Tactical VTAC MK II ikwanayo nepokotho enkulu yangaphambili. Ngokungafaniyo namanye amatyala ompu endakha ndawazama ngaphambili, le ingena kwiAccuTec bi-pod yam enkulu.
Ngaphandle kwepokotho ephambili, uya kufumana iipokotho ezimbini ezongezelelweyo ngasekunene nangasekhohlo. Ezi zilungele ukugcina nantoni na ukukhusela indlebe ukuya kwiiglasi zokudubula, i-ammo, igrisi / i-lube, izixhobo, nokunye okuninzi. Ngelixa zijongeka zincinci ekuqaleni, banokumangalisa ukubamba izixhobo ezininzi.
Ukuba ayonelanga loo ndawo kuwe, ii-laser-cut web kunye neepulatifomu zeluphu ukuxhoma naziphi na iingxowa ozifunayo kufuneka zibekhona. Kungakhathaliseki ukuba uthwala ntoni kwaye uvela kwibala, into enye ndiqinisekile ukuba uya kuthanda njengokuba ndiyenzayo yimiba yokunciphisa. Ukwenza i-cinching phantsi zonke izixhobo zakho ukuthoba iprofayile yetyala lakho, bayasebenza kakhulu.
Ngasemva kwimeko ye-5.11 yeTactical VTAC MK II, uyakufumana inkqubo eyi-5.11 yeYoka Backpack. Kukhululekile ukunxiba, ukubonelela ngohlengahlengiso oluninzi, kunye neempawu zokufaka iphedi enokuphefumla.
Kwiintsuku xa ingalo yam ingafuni ukuthwala umthwalo onzima kangaka wezixhobo, ukubeka bonke ubunzima kumqolo wam kwenza ubomi bube lula. Ewe kunjalo, ukuba unqwenela ukususa uphawu lobhaka, konke kuyithatha ngokungakhathali iziqwengana ezimbini ezikhawulezayo ecaleni kwemitya emibini elula. Ezinye izinto ezintle oza kuzifumana ziwindow yesazisi, iiziphu eziqinisiweyo, i-WritBar, kunye neVelcro 5.11 yeTactical logo patch indawo ngasemva.
Ngokumalunga nokuhlala ixesha elide, ityala le-5.11 leTactical VTAC MK II liza ne-nylon ye-1050 ngaphakathi kunye ne-500D ripstop ngaphakathi. Yintsimi evavanywe ziiViking Tactics ecaleni kwam, kwaye kufuneka nditsho ukuba le yimeko enye yompu oqinileyo. Umgangatho wokwakha umhle kakhulu, kwaye ndilindele ukuba le tanki yetyala ihlale iminyaka ngaphakathi nangaphandle.
ubuhle kunye nesilo esipilini sokuzoba
Ingubo yejamani ye tattoo
san judas tattoo engalweni
Isinxibo esikhethekileyo seHalloween samadoda
I-rose kunye nebhabhathane yokuzoba tattoo
Uyilo lwe tattoo yengalo yamadoda
ibhedi yeentyatyambo ngokuchasene nocingo lweenkuni